Ukuzibophezela kwethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngekhwalithi ephezulu kakhulu
imisebenzi kanye nemikhiqizo ngamanani akhokhelekayo.
Ama-Airwoods ungumhlinzeki ohola phambili womhlaba wonke wokushisa okushisa kahle, okhipha umoya kanye nemikhiqizo yokupholisa umoya kanye nezixazululo eziphelele ze-HVAC ezimakethe zokuhlala, ezentengiso nezimboni.
Sizinikezele ekuthuthukiseni ucwaningo nobuchwepheshe emkhakheni wamayunithi wokutakula amandla nohlelo lokulawula smart iminyaka engaphezu kwengu-19. Sine ithimba le-R & D eliqinile eliqoqa isipiliyoni seminyaka engama-50 embonini, futhi libe namalungelo obunikazi amaningi minyaka yonke.
Sinabachwepheshe abangaphezu kuka-50 abanolwazi abangochwepheshe ku-HVAC kanye ne-cleanroom design yezicelo ezahlukahlukene zomkhakha. Unyaka ngamunye, siqeda amaphrojekthi angaphezu kwekhulu emazweni ahlukene. Ithimba lethu linganikeza ngezixazululo eziphelele ze-HVAC kufaka phakathi umxhumanisi wephrojekthi, ukuklama, ukuhanjiswa kwemishini, ukufakwa, ukuqeqeshwa, ukugcinwa, kanye namaphrojekthi we-turnkey ukuze ahambisane nezidingo zamakhasimende ahlukahlukene.
Sihlose ukuletha ikhwalithi yomoya yokwakha enhle emhlabeni ngemikhiqizo eyonga ugesi, izixazululo ezenziwe kahle, amanani angambi eqolo kanye nezinsizakalo ezinhle kumakhasimende ethu.
Ukuxhumana Kwesistimu Nokusetshenziswa
Nikeza ngezinsizakalo zokubonisana neziphakamiso, ukukhethwa komkhiqizo nemidwebo yokuklama ngokusho kwamaphrojekthi.
Isixazululo Sesistimu Nezinto Zokusebenza
Nikeza ngezixazululo ezenzelwe ukwakhiwa, ukuthengwa kwempahla, ukuthuthwa, ukufakwa, ukuqeqeshwa kanye nezinsizakalo zokuthumela
Ukufakwa kwe-Oversea nokuthunyelwa
Ithimba lokufaka i-Airwoods linolwazi oluningi lokwakha esizeni, ukufakwa kanye nokuthunyelwa.
I-Operation Training & Ngemuva Kwesevisi Yokuthengisa
Nikeza ngoqeqesho lobungoti ukusiza amakhasimende ukuphatha kangcono uhlelo lwawo, ukunciphisa amaphutha nokwandisa isikhathi senkonzo yomshini.
Isixazululo Sekamelo Elihlanzekile le-GMP
Isixazululo Sokukhiqiza Izimboni HVAC
Izixazululo ze-Commercial Buildings HVAC
Izixazululo ze-Modern Farm HVAC
Isixazululo Sokwakha I-HVAC Yezemfundo
Isixazululo Sokwakha Indawo yokuhlala ye-HVAC